SYL Entertainment – Page 20 – News
အင်းစိန်က စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုဗစ် စောင်ကြည့်လူနာတွေက လုပ်သွားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခု
ယခု သတင်းကို ( Thurein Tun ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် အင်းစိန် GTI မှာ Quarantine ဝင်တဲ့သူများက ကျွန်တော်တို့ Volunteers တွေကို အိမ်အပြန်လက်ဆောင် ပေးသွားသေးတယ် အခန်းထဲမှာ မစင်စွန့် အမှိုက်တွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ပစ် ဒီလောက်လိုလေသေးမရှိ အစားအသောက်၊ သန့်ရှင်းရေး ၊ကျန်းမာရေး ၊ ကုတင်စောင်ခြင်ထောင် ၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ WiFi […]
မော်လမြိုင် Quarantine မှ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ၁၅ နှစ်နဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် လင်မယား နှစ်ဦး ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းတဲ့အခါ
ယခု သတင်းကို ( Zin Moe ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မော်လမြိုင် (၁၀)မြို့နယ်အဆောင် Facility Quarantine ပြုလုပ်ထားသည့်နေရာမှ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ထွက်ပြေးသွားသည့် လင်မယားစုံတွဲ (၂)ဦးပါ။ နေတာက ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ပါ မောင်ဝင်းမင်းကျော် (၁၇)နှစ် (ဘ)ဦးကျော်ဇင် မသွယ်တာထွန်း (၁၅)နှစ် (ဘ)ဦးခမ်းပိုင် မော်လမြိုင် Quarantine မှ […]
ဒီကနေ့ ည ရှစ်နာရီ ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ယခု သတင်းကို ( MOHS ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေတွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁၅) ခု၏ ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် – • COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိပါ။ […]
နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း တစ်ခါမှ မကြုံဖူးရလောက်အောင် ထူးခြားစွာ ကြည်လင်နေတဲ့ ချင်းတွင်းမြစ်ရေ
ယခု သတင်းကို ( Thein Lwin ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော် လွန်၍ ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကာလအလွန်တွင် ချင်းတွင်းမြစ်(ခ)သလ္လာဝတီမြစ် မြစ်ရေ ထူးခြားစွာ ကြည်လင်နေခြင်း ချင်းတွင်းမြစ်(ခ)သလ္လာဝတီ မြစ်ဟာ ဥရုမြစ်(မြစ်ညှာ ဖားကန့်ဒေသ)၊ ယုမြစ်(ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်း)၊မြစ်သာမြစ်(ကလေးချိုင့်ဝှမ်း) မြစ်လက်တက်များဖြင့် ပေါင်းဆုံစီးဆင်းနေသော မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ပါကြောင်း- ယခုအခါ ချင်းတွင်းမြစ်၏ မြစ်လက်တက်များ အနီးတဝိုက်တွင် ရွှေရှာဖွေ တူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မူလျော့နည်ခြင်းကြောင့်လေလား၊ […]
ရောဂါတွေ ဖြစ်နေလို့ ထမင်းဆိုင်တွေ ပိတ်ထားရပေမယ့် သူမရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ ….
ယခု သတင်းကို ( မအိအိချော ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ကာလ ဒါန အရမ်းချမ်းသာလို့တော့မဟုပ်ပါဘူးနော့ ကပ်ရောဂါကြောင့် ထမင်းဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင် တွေကို ဆိုင်ထိုင်စား ခွင့်မပြု ပဲ ပါဆယ် သာရောင်းချ ဖို့ ခွင့်ပြုထားပေမဲ့လဲ ငွေ ပေး ငွေယူ က တစ်ဆင့် ထိတွေ့မုရှိရင်လဲ ကူးစက်နိုင်ပြီး ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာထမင်းဆိုင်များပိတ်ထားသောကြောင့် ပိုက်ဆံပါပေမဲ့ထမင်းဝယ်စား လို့မရ […]
စည်းကမ်းမလိုက်နာဘဲ ပုံဂံညောင်ဦး ဘုရားဖူး ထွက်လာ ကြသူများ ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ….
ယခု သတင်းကို ( ကိုဆော် ပုဂံ ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ၂၅.၄.၂၀၂၀ ဆင်ဖြုကျွန်းမြို့မှ ပုဂံညောင်ဦးမြို့သို့ထွက်ခွာလာ သော ယာဥ်တစ်စီးအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် အတွက်ရပ်တန့်ပေးရန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှတားမြစ် ခဲ့၍ ရပ်တန့်ပေးပါသည်။ သို့သော်ထိုယာဥ်ပေါ်ပါခရီးသွားအဖွဲ့အားအောက် သို့ခေတ္တခဏဆင်းခိုင်းခဲ့ရာထိုခရီးသွားအဖွဲ့အား လူဦးရေး စစ်ကြည့်ရာ လူဦးရေး (၁၆)ယောက်တင် ဆောင်လာသည်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိ၍ ထိုအဖွဲ့အား ဘယ်ကိုသွားမှလဲဟုမေးမြန်ရာ ပုဂံညောင်ဦးမြို့ ဘုရားစေတီပုထိုးများလာရောက်ဖူးမျော်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောဆိုရာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး […]
ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ တစ်ယောက်မှ မရှိသေးတဲ့ ဗီယက်နိုင်ငံမှာ ရောဂါကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်နေကြသလဲ
ယခု သတင်းကို ( မိုးမင်းကောင်းကင် ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် Covid ကြောင့် သေဆုံးသူမရှိသေးတဲ့ ဗီယက်နမ် ….ဗီယက်နမ်က Covid အပေါ် တုန့်ပြန်မှုကို ကမ္ဘာကြီးက သင်ယူလိုက်ပါ… ဗီယက်နမ် နဲ့ Covid ..တရုတ်ဖြစ်နေချိန် Jan 24 က 2C နဲ့ စခဲ့..သူ့ထက် တစ်ရက်စောတာက USA …သူနဲ့တန်းတူက စင်္ကာပူ..သူ့ထက်နဲနဲစောတာက […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရ ရာက ပြန်ကောင်းလာတဲ့ယူကေရောက် ဆရာဝန်မလေးရဲ့ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံ
ယခု သတင်းကို ( ဒေါက်တာလင်းစန္ဒာလှိုင် ) ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဒီနေ့ဆို ရောဂါလက္ခဏာ စပြတာ ၈ ရက်မြောက်နေ့လို့ ရေတွက်ထားတဲ့နေ့။လူက နေပြန်ကောင်းလာတဲ့ လက္ခဏာလေးတွေ (Recovery symptoms)လေးတွေ စပြနေပြီ။မနေ့က ပုဇွန်ကြော်နဲ့ ထမင်း ၂ ပန်းကန်၊ ငါးပိရည်နဲ့ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့နယ်တာက ထမင်း ၂ ပန်းကန်စားတယ် ဆိုတော့ တော်တော်တိုးတက်လာတယ် ဆိုရမယ်။စားပြီးရင်တော့ နုံးပြီး […]
ကိုဗစ် ရောဂါနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဒီနေ့ ၂၅ ရက်နေ့ ည ရှစ်နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်
ယခု သတင်းကို ( MOHS ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲ မှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ပထမအသုတ်အဖြစ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၂) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော […]
မင်းတို့က သူဌေးလေဆိုပြီး စော်ကားပြောဆိုနေတဲ့ သူတွေကို ပေါက်ကွဲနေတဲ့ အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်
ယခု သတင်းကို ( Aung San Win ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မင်းတို့ကသူဌေးလေဆိုပြီး စော်ကားထားတဲ့သူတွေကြည့်ဘို့ Video (2)မိနစ်…. မျှမျှတတ တွေးတတ်ရတယ် ငါကသူဌေးဆိုပြီးတော့လည်း ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကို အပြစ်မတင်နဲ့ ငါကဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း သူဌေးကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့ သူအခက်အခဲ နဲ့သူရှိကြတာပဲ ဒါကို လိုက်ပြီးဖောင်ထုနေမယ့် အစား မျှမျှတတ တွေးပေးပါလို့လည်း ပြောပါရစေဗျာ…. ကိုယ့်အခက်အခဲ ကိုပဲကြည့်နေရင်တော့ […]